दोर्जे शेर्पाका परिवारलाई सरकारले हेर्नुपर्छ ? - Enepalese.com
दोर्जे शेर्पाका परिवारलाई सरकारले हेर्नुपर्छ ?
इनेप्लिज २०७३ असोज ८ गते २३:०६ मा प्रकाशित
न्युयोर्क । मनास्लु राउण्ड जाने क्रममा पहिरोमा परी निधन भएका अन्तराष्ट्रिय माउण्टेन गाईड दोर्जे लामा शेर्पा सन् २०१५ मा सगरमाथा आरोहणमा जाने तयारीमा थिए । तर, परिवारिक कारणले शेर्पा भारतीय सेनाको टोली एनसीसी दलको नेतृत्व गर्दै विश्वको सर्वोच्च शिखर आरोहणमा गएनन् ।
बिनाशकारी भूकम्प र हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित हिम पहिरोको कारण दुई छोरा र एक छोरीका पिता शेर्पाले परिवारीक दबावमा जोखिम लिन चाहेनन् । पछिल्लो पटक परिवारिक हेरचाहमा ध्यान दिइरहेका शेर्पालाई अन्तत ः मनास्लुको अप्रत्यासित हिमपहिरोले लग्यो । हिमाली क्षेत्रमा १५ बर्षभन्दा बढी समय पथप्रदर्शकको रुपमा बिताएका सगरमाथा आरोही शेर्पाको अकस्मान निधनले देशले एक होनहार ब्यक्तित्व गुमाएको छ ।
नेपाल पथप्रदर्शक संघका अध्यक्ष समेत रहेका शेर्पाले निधन हुनु भन्दा केही महिना अघि देखि हिमाली क्षेत्रमा पथप्रदर्शक र पर्यटकलाई मौसमको निशुल्क जानकारी दिनुपर्छ भनेर सशक्त रुपमा आवाज पनि उठाउदै आएका थिए । हिमपहिरोमा निधन भएका पथप्रदर्शकका परिवारलाई उनले सहयोग पनि गरेका थिए । तर, आज दोर्जेको परिवारनै सहयोगको प्रतिक्षामा छ ।
नेपालको पथप्रदर्शन क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो समय बिताएका ३५ बर्षिय शेर्पाका श्रीमती, दुइृ छोरा र एक छोरी छन् । सोलुखुम्बुमा जन्मीएर हाल गोकर्णमा बसोवास गर्दै आएका परिवारका मुख्य ब्यक्तित्व शेर्पाका निधनले उनको परिवारमा ठूलो संकट आइपरेको छ ।
सरकारले नेपालमा आरोही र पथप्रदर्शकको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेको कारण कतिपय आरोही पलायन हुने, पेशाा छाड्ने र अनायासमा ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोवास गर्ने पथप्रर्शकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
दोर्जे शेर्पासंगै सन् २००४ मा तालिम लिएका नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक गेल्बु शेर्पा भन्दछन्, “दोर्जेले पथप्रदर्शकको रुपमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिस्तरमा नेपालको नाम चिनाए । नेपालको नेशनल माउण्टेन गाईडको स्थापनामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । यस्ता ब्यक्तित्वको परिवारलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । ”
परिवारको मूल धनीको निधन भएपछि छोरा, छोरी र श्रीमतिको रेखदेख र पालनपोषणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने शेर्पाको भनाई छ ।
‘अध्ययनसंगै नयाँ नयाँ विषयमा रुची राख्ने अन्तराष्ट्रिय पथप्रदर्शक दोर्जे लामा शेर्पा निकै मिलनसार ब्यक्तित्व थिए’, हार्ट बिट न्युयोर्कका अध्यक्ष पेमा छेवाङ शेर्पा भन्दछन् – “हामीले संगै पथप्रदर्शकको तालिम लिएका हौ । तालिममा पनि निधै अब्बल उनी हामी माझ छ्र्र्रैनन् तर उनको परिवारलाई नेपाल सरकारले हेर्नुृपर्छ । ”
न्युयोर्कबाट प्रकाशित एभरेष्ट टाईम्स पत्रिकाका सम्पादक एवं सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो पत्रकार आङछिरिङ शेर्पाले पनि दोर्जेको परिवारलाई सहयोग गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । पत्रकार शेर्पाले दोर्जेको निधनले राष्ट्रको एउटा होनहार पथप्रदर्शक गुमाएको जनाएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय माउण्टेन गाईड एवं नेपाल पर्वतारोहण संघका सदस्य लाक्पा शेर्पाले मनास्लु हिमालमा जाने क्रममा बाटोमा दोर्जेको निधन भएको बताएका छन् । शेर्पाका दोर्जेका बालबालिकाको शिक्षा र आगामी भविष्यप्रति आफूहरु चिन्तित भएको जनाए ।
दोर्जेको परिवारको हेरचाह सम्बन्धमा नेपाल पर्वतारोहण संघले पहल अगाडि बढाउने पनि शेर्पाले जानकारी दिएका छन् ।
सगरमाथा आरोही संघका सदस्य शिव सापकोटाले अहिले पनि सरकारले आरोहीको हक, हित र उत्थानको लागि काम गर्न नसकेको जनाएका छन् । जीविकोपार्जनको लागि जोखिम मोलेर हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने महदूर रआरोहीको समाजिक सुरक्षाा र हेरचाहमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सापकोटाको भनाई छ ।
‘मैले पनि दोर्जे सरसंग तालिम लिएको हु,’ आरोही सापकोटा भन्दछन््, पथप्रदर्शक क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रले एउटा होनहार ब्यक्तित्व गुमाएको छ । शेर्पाको निधन भएपनि उनको परिवारलाई कुनै समस्या आउन नदिन हामीहरुले पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छौ । ”